Toriteny 27 Oktobra 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny 27 Oktobra 2013
Genesisy 24: 12-28 / Marka 5: 25-34 / I Petera 5: 5-11
Ity no Alahady farany hiainantsika ny lohahevitra hoe”Manantna fahombiazan ny mino” . Ny Perikopa anio dia mbola manome toromarika ho an’ny mino rehetra ny amin’izay toe-po, fitsipi-piainana mba ahazoana izany fahombizana ampanantenain’Andrimanitra ny mino izany.
Te hahita fahombiazana ve ianao ?
1- Manome tolo-tsaina ho an’ny mino Andriamanitra
Gen 24 : 12 dia mampiseho miharihary ny tantaran’ilay mpanompon’ I Abrahama nirahina nitady vady ho an’Isaka. Sarotra tokoa ny iraka ; tsy nolaviny fa tena nataony tamin’ny fahavononana izany ; tsy ny fahaizany na ny herin’ny tenany no nanatanterahany izany asa izany; fa nankininy tamin’Andriamanitra tanteraka cf and 12b “Jehovah o ! ambino aho anio”. Vitany ny iraka nampanaovina azy ary nahita fahombiazana izy araka ny tohin’ny tantara. Ry Kristiana namana, amin’ny zavatra kasaina atao eo amin’ny andavan’androm-piainana dia mila mamantatra tsara isika hoe ankasitrahan’Andriamanitra ve sa tsia io fikasako io ? Ny fahombiazana eo amin’ny fiainana dia miankina tanteraka amin’ny fahaizana mamantatra tsara ny sitrapon’Andriamanitra ary manankina Aminy tanteraka izany fikasana izany.
2- Mandeha amim-pahatokiana
Ny fiainan’ny olona mino an’Andriamanitra ka tena miaraka Aminy, dia tsy mandeha amin’ny andrakandrana na kitsapatsapa fa mivelona amin’ny finoana tanteraka, ny tantaran’ity vehivavy narary 12 taona raha vao nahare fa nandalo Jesoa, izay fantany fa afaka hanasitrana azy dia, nataony izay fomba rehetra hanatonana azy na inona na inona mety ho vokany. Sitrana soa aman-tsara ilay zazavavy. Isika koa ampianarin’ny Tenin’Andriamanitra, aza miahanahana fa mandehana am-pahatokiana. Tsy lavina fa tena sarotra ny manara-dia an’I Jesoa Kristy kanefa rehefa ataontsika ho tanjona ny handray Azy ho tena fianantsika dia ho hiharihary ny voninahitr’Andriamanitra sy ny fahombiazana azo tsapain-tanana eo amin’ny fianana.
Ho fehin’izay rehetra voalaza dia : tsy hisy fahombiazana raha tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra ny fikasana eo amin’ny fiainana, taomina ny mino mba hisaina sy hivelona mandrakariva amin’izany sitrapon’Andriamanitra izany ; ary indrindra mba andeha am-pahatokiana fa tsy hisalasala ny amin’I Jesoa Kristy Mpamonjy ; izay ampy maharakotra ny antsipirian’ny fiainantsika manontolo ka manome toro marika ny amin’izay lalana hizorana. Ekena fa misy ny sakana amin’ny endriny maro samihafa eo amin’ny fanarahana sy fanekena ny Tompo, nefa Izy mampijoro sy manohana ary ny tso-drano omeny no haha tafatoetra antsika ka mitondra antsika ho amin’ ny fahombiazana .
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 31 octobre 2013